Dr. Tint Swe's Writings: Middle ear infection နားပြည်ယိုခြင်း
Middle ear infection နားပြည်ယိုခြင်း
နားကိုပိုးဝင်တာက ၈ဝ% ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကနေဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုရင် ပိုးသေဆေးမလိုဘူး၊ မရဘူး။ Streptococcus ဗက်တီးရီးယားကနေ ဖြစ်တာလဲ မနည်းဘူး။ နား နာမယ်၊ အဝါရည်၊ အရည်ကြည်၊ အချွဲရည် ထွက်မယ်။ ကိုယ်နဲနဲ ပူမယ်။ ပိုးသေဆေးလိုမယ်။
Acute otitis media ရက်တို နားအလယ်ပိုင်းရောင်တာ အတော်အဖြစ်များတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ရော ဗက်တီးရီးယားကပါ ဖြစ်စေတယ်။ အလာဂျီနဲ့လည်းတွဲနေတတ်တယ်။ တက်စေ့ရောင်တာရှိနိုင်တယ်။ နာထဲအသံမည်နေတာရှိနိုင်တယ်။ ခေါင်းမူးရောဂါဆက်ဖြစ်တတ်သေးတယ်။
Middle ear infections နားအလည်ပိုင်းရောင်တာဟာ အများအားဖြင့် အသက်ရှူလမ်းအပေါ်ပိုင်းပိုးဝင်တာကနေ ဆက်ဖြစ်တယ်။ အအေးမိတာကနေဖြစ်တာများတယ်။နားအလည်ပိုင်းမှာ အရည်စုလာမယ်။ ပိုးထပ်ဝင်လာမယ်။ ပြည်တည်မယ်။ အရည်ပိုထွက်မယ်။ နားစည်ကိုဖိအားသက်ရောက်မယ်။ နားအကြားထိခိုက်ခံရမယ်။ ကိုယ်ပူနိုင်တယ်။ နာမယ်။ ပေါ်လိုက် သက်သာလိုက်နေနိုင်တယ်။ ပိုးသေဆေးပေးရမယ်။ ပိုးတွေသေပြီး အနာကျက်ဖြစ်စဉ်ကောင်းမှ ပျောက်မယ်။ ဆိုးရင် နားစည်ပေါက်မယ်။ အရည်ထွက်သက်သာမယ်။ အဖျားကျမယ်။ သူ့အလိုလိုပြန်ပိတ်နိုင်တယ်။
ပိုးသေဆေးမှာ စားဆေးနဲ့ နားဆေးရည်။ Decongestants and/or antihistamines အအေးမိတာမှာသုံးတဲ့ဆေးလည်း လိုမယ်။ အနာ-အရောင်သက်သာဆေး ပါရာစီတမောလိုဆေးလိုမယ်။
ဗက်တီးရီးယား ကနေဖြစ်တဲ့ နာရောင်တာအတွက် ပဋိဇီဝဆေးတွေ
• Amoxicillin 500mg တခါသောက် ၁ တောင့်၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ အနည်းဆုံး ၅ ရက်သောက်ပါ။ Augmentin လည်း ပေးတယ်။
• Sulfonamide Antibiotics တွေထဲမှာ Bactrim, Septra နဲ့ Gantrisin တွေပါတယ်။
• Cephalosporin Antibiotics တွေထဲမှာ Ceclor, Ceftin, Cefzil, Vantin, Suprax နဲ့ Lorabid တွေပါတယ်။
• ဆေးတွဲပေးတာတွေလဲ ရှိတယ်။ ဥပမာ Pediazole = Erythromycin + Sulfisoxazole
အသုံးများတဲ့ နားထည့်ဆေးတွေကတော့ -
1. Betamethasone Eye/Ear Drops 0.1% w/v + 0.002%
2. Carboxy Methyl cellulose sodium -Eye 0.5%
3. Chloramphenicol Eye/Ear drop 5ml & 10 ml
4. Ciprofloxacin Eye Drops 5ml & 10ml
5. Gentamicin Eye/Ear drop 5ml & 10 ml
6. Neomycin Sulphate Eye/Ear drop 5ml & 10 ml
7. Ofloxacin Eye Drops
8. Prednisolone Acetate Eye/Ear drop 5ml & 10 ml
9. Prednisolone Chloramphenicol Eye Drop 10ml
10. Soframycin Eye/Ear Drop 8ML
နားပြည်ယိုရင် ပြည်ကိုထုတ်ပေးရမယ်။ များရင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုက်ဆေးရည်နဲ့ အရင်ရှင်းပြီးဂွမ်းစလေးနဲ့ သန့်ရမယ်။ ပြီးရင် ပိုးသေဆေးရည်ခပ်ပါ။ ပိုးသေဆေး ဆေးပါတ်လည်သောက်ပါ။
Fluid in the ear နားထဲမှာအရည်ရှိတာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/fluid-in-ear.html
Middle ear infection နားပြည်ယိုခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/middle-ear-infection.html
Otomycosis (ear fungus) နားမှို http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/otomycosis-ear-fungus.html
Ringing in the Ears နားအူခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/ringing-in-ears_29.html
An injectable HIV treatment could be ready by 2017...
Richard Nixon's signature လက်မှတ်ကပြောတဲ့ သူ့သမိုင...
Natural disasters everywhere သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (၃...
Natural disasters everywhere သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (၂...
Natural disasters everywhere သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (၁...
Cough Syrup Addiction ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစွဲခြင်း...